मौसमी तथा बेमौसमी काँक्रो खेती बारे सम्पूर्ण जानकारी, जानिराखाैँ - e-Sidha Nepal
काँक्रो खेती ७ बैशाख २०७७, आईतवार ०५:४५
काँक्रोको वनस्पति नाम कुकुमिस साटिभस हो । यो कुकुरविटासी परिवारमा पर्दछ । काँक्रोको उत्पति नेपाल र भारतको दक्षिण पूर्वी भागमा भएको मानिन्छ । अन्य लहरे बाली जस्तै काँक्रोले पनि धेरै गर्मी र धेरै जाडो सहन सक्दैन । यसलाई लामो समयसम्म न्यानो तापक्रमको आवश्यक पर्दछ ।
काँक्रो तराईमा माघ, फागुनमा रोपिन्छ भने बेमौसमी खेतीका लागि पुसमा बेर्ना तयार गरी रोपिन गर्दछ । मध्य पहाडमा फागुन, चैतमा रोपिन्छ भने उच्च पहाडमा वैशाखदेखि जेठसम्म काँक्रो रोपिने गर्दछ । यो धेरै जातका हुन्छन् । तीमध्ये कुनै ४५ दिन भित्र र कुनै ६०-६५ दिन भित्र फल्दछ । काँक्रो १२ सेमिदेखि ४५ सेमिसम्म लामो र ५ देखि १५ सेमिसम्म गोलाइ भएको पाइन्छ ।
काँक्रोको बोट कम लहरादेखि बढी लहरा जाने र त्यस्तै हाँगाहरू पनि कम र धेरै हुने पाउँदछन् । पातको फेदबाट त्यान्द्राहरू निस्कन्छन् । यस्को जरा लामो गहिरोसम्म जाने हुन्छ र एउटै बोटमा भाले र पोथी फूलहरू हुन्छन् । यसलाई राम्ररी थाँक्रा दिन सकेमा मात्र राम्ररी फल्छ । साथै काँक्रोको पहिलो मुन्टा चुडिदिएमा धेरै लहरा निस्कन्छ र बढी फल लाग्दछ ।
काँक्रोमा भिटामिन सी, पोटासियम, फोलिक एसिड प्रसस्त मात्रामा पाइन्छ । यसबाहेक यसबाट कार्बोहाइडे्रट, क्याल्सियम, फोस्फोरस, फलाम, सल्फर आदि पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसमा पानीको मात्रा झण्डै ९४ देखि ९६ प्रतिशतसम्मा हुन्छ ।
प्रति रोपनी जमीनबाट काँक्रोको उत्पादन कति सम्म लिन सकिएला ?
काँक्रोको खेतवारीमा गोडमेल गर्न जादा हाम्रो अनुहार, आँखा, कान, जीउमा साना कीरा फट्फट गरिरहेका हुन्छन् ती कीराको नाम के हो ? यिनीहरुको व्यवस्थापन विधी के अपनाउन सकिन्छ?
हामीले उत्पादन गरेका काँक्रोका फलहरु कहिले काँही तिता–तिता हुन्छन् कारण के होला ?
काँक्रो फलमा कुकुरविटासिन (Cucurbitacin) नामक तत्वका कारण तितोपन आउँदछ ।
कहिले काही जाडो याममा प्लाष्टिक घरभित्र पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिन्न, यसको राम्रो उत्पादनको लागि के के उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ ?
प्लाष्टिक घरका काँक्रो उत्पादन गर्दा बिचार नपुर्याखई नहुने कुरा के के हुन ?
फल भण्डारण गर्नुपर्दा कति तापक्रम र आर्द्रतामा राख्दा लामो अवधि टिकाउन सकिन्छ ?
फल ढुवानी गर्दा कसरी फललाई बचाउन सकिन्छ ?
राम्रो भाउ पाउन छनौट/ग्रेडिङ्ग गर्दा कुन कुन कुराहरुमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ?
फल कुन कुन समयमा टिप्नु पर्दछ ?
काँक्रो वालीमा काँटछाट र तालिम भन्नाले के बुझिन्छ ? यसबाट के फाइदा हुन्छ ?
जाडो याममा एक डाँठ खेती गर्दा सबै शाखा हाँगाहरु शुरुमै हटाउदै जानु पर्दछ । नफलेका बुढा हाँगा, बुढा र रोगी पातहरु आर्कषक नभएका कलिला वा ठूला फलहरु हटाई रहनु पर्दछ । वोटलाई दिएको छाप्रो वा थाँक्रामा पनि मुन्टा लगाई राख्नु पर्दछ जसले गर्दा लहरा फैलन र फल लाग्न सहयोग पुग्दछ ।
काँक्रो वालीमा थाँक्रा अथवा छाप्रो बनाउन किन आवश्यक हुन्छ र कसरी बनाईन्छ ?
कुनै कुनै बेला काँक्रो लगाएको खेतवारीमा ज्यादै नराम्रो गन्धको महसुस हुने कारण के हो ? यसको ब्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
पतेरो भन्ने कीराको कारणले कहिले काही काँक्रो लगाएको ठाँउमा नराम्रो गन्ध फैलिरहको हुन्छ ।
फेरोमन ट्रयापमा भाले झिगांहरु पर्दछन ? यसको कारण के हो ?
क्यूलिएर नामक फेरोमन ट्रयापले कुन कुन कीराहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? यसको लागि कुन कुन रसायनहरु प्रयोग गर्नुपर्दछ ?
क्यूलिएर नामक फेरोमन ट्रयापमा फल कुहाउने झिंगाको भाले कीरालाई ट्रयापमा पारी नष्ट गरिन्छ । यसमा भाले आकर्षित हुने क्यूलिएर ४ थोपा र मालाथायन वा नुभान ५–७ थोपा राखि बनाएको फेरोमन पासो ५–६ फिट उचाईमा झुण्डाएर राखिन्छ ।
कुन कीराको आक्रमणले गर्दा काक्राको फलको आकार प्रकार बिगारी दिने र कुहाउने गर्दछ ?
लाही कीराको प्रकोपले काँक्रो वालीमा कुन हदसम्म नोक्सानी गर्दछ ?
पाटे खपटेले काँक्रो वालीमा कसरी वालीमा नोक्सानी पुर्याउँद छ र यसको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
रातो खपटे कीराले वालीको कुन–कुन अवस्थामा आक्रमण गर्दछ ? यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय के हो ?
काँक्रोमा कागे रोगको लक्षण कस्तो हुन्छ ? यसको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
काँक्रोको पात गुजमुज हुने रोग कुन कीराको माध्यमबाट फैलिन्छ ? यसको रोकथाम गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय के होला ?
यो रोग चुसाहा कीराको माध्यमबाट फैलिन्छ।यो भाईरसको कारण पातहरु गुजमुजे हुन्छन् । यसको ब्यवस्थापन गर्न रोगी विरुवाहरु उखेलेर हटाउने, चुसाहा कीरा मार्नलाई रोगर १ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा मिसाई १०–१५ दिनको फरकमा स्प्रे गर्नु पर्दछ ।
काँक्रोको पातको तल्लो सतहमा पानीले भिजे जस्तो रोग के कारणले गर्दा लाग्दछ ? यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ ?
डाउनी मिल्डयूले विरुवामा कस्तो असर गर्दछ तथा व्यवस्थापन विधि कस्तो हुनुपर्दछ ?
धुलो ढुसी रोग कसरी पहिचान गर्ने र यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ ?
पातको माथिल्लो सतहमा सेतो खैरो ढुसीको विकास भई रोगी विरुवाका पातहरु पँहेलिन्छन् र सुक्न थाल्दछन् । आक्रमण बढी भएमा पात डाँठ साथै लहरामा पाउडर छरे जस्तो देखिन्छ । यसको रोकथाम गर्न घरेलु उपचार विधि जस्तै गाईको गहूँत १ भाग र १० भाग पानी मिसाई ४–५ दिनको फरकमा छर्ने, बढी नै आक्रमण भएको खण्डमा क्याराथेन ०.२ प्रतिशत अथवा बेभिष्टीन ०.१ प्रतिशत ७–१० दिनको फरकमा ३–४ पटक छर्नु पर्दछ ।
मौसम अनुसार सिचाई तथा निकासको व्यवस्था कस्तो हुन जरुरी छ ?
काँक्रो वालीमा गोडमेल कसरी गरिन्छ ?
व्यवसायिक काँक्रो खेती गर्दा मलखादको ब्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
काँक्रोको बीउ सोझै खेतमा रोप्न सकिन्छ तर आजकल किन प्लाष्टिक ब्यागमा पनि उमारिन्छ ?
काँक्रो रोप्ने जमीन कसरी तयार गरिन्छ ?
नेपालमा हाईब्रीड जात प्रवेश भएपछि बेमौसमी काँक्रो खेती शुरु गरिएको छ, यी जातहरुमा के विशेषता पाइन्छ ?
राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिले भौगोलिक क्षेत्र अनुसार सिफारिस गरेका जातहरु अलग–अलग उल्लेख गरिदिनु हुन्थ्यो कि ?
भक्तपुर स्थानिय जातको विशेषता के हो ?
कर्भी भन्ने जातको विशेषता के हो ?
बढी गर्मी र बढी जाडो सहन सक्ने खालका जातहरु कुन–कुन हुन ?
नेपालमा पाइने स्थानिय जातहरुमा कुन जात सबैभन्दा प्रचलित छ र किन ?
यसलाई कस्तो किसिमको माटो उपयुक्त हुन्छ ?
यो वाली कस्तो किसिमको हावापानीमा राम्रो फस्टाउँछ ?
काँक्रोमा कुन कुन खनिज तत्वहरु बढी मात्रामा प्राप्त हुन्छन् ?